Hlola iKenya - World Tourism Portal
Yini ukubona. Izindawo ezihamba phambili ezihamba phambili eKenya
Okufanele ukwenze Kenya
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yaseKenya
Bukela ividiyo ngeKenya
Hlola i-Kenya, tUngumnotho onamandla kunabo bonke eMpumalanga Afrika futhi uyizwe elinemali ephakathi nenabantu abakhula ngokushesha, kepha nokho liseyizwe elithuthukayo, ngakho-ke izici ezithile zomphakathi wezwe kanye nengqalasizinda zingathusa ezinye izivakashi ezivela amazwe angajwayele ikhwalithi yempilo atholakala kuyo amaKenya amaningi. ISocio - ukungalingani kwezomnotho kuyabonakala futhi, lapho iningi lamaKenya aphakathi nendawo aphila ngokuphila ngendlela ecebezekile ngenkathi amanye amaKenya amaningi ehola kancane ehlala emgungundlovu.
Yize zakhiwa izinhlanga nezizwe eziningi ezahlukahlukene, amaKenya anombono oqinile wokuqhosha kazwelonke okungenzeka ukuthi ngenxa yobumbano emzabalazweni we-Uhuru (isi-Kiswahili: “inkululeko”) - ukukhululeka embusweni wamakoloni waseBrithani, okwatholakala ku1963. Iningi lamaKenya libukeka linethemba ngekusasa lezwe. Kuyaqondakala ukuthi amaKenya aphishekela amathuba ebhizinisi anikezwa ezokuvakasha ngentshiseko okungenzeka ukuthi ibeka izivakashi ezithile, kepha zivame ukuvulekile, zikhulume futhi zibe nobungane uma nje izindaba zebhizinisi sezilungisiwe.
IKenya inesimo sezulu esishisayo esishintshashintshwa ngokulinganiselwa. Kuyashisa futhi kunomswakama ogwini, kushubisa umnkantsha ngaphakathi futhi komile kakhulu ezindaweni ezisenyakatho nasenyakatho-mpumalanga.
IKenya ithola ukukhanya okukhulu kwelanga unyaka wonke futhi izingubo zasehlobo zigqokwa unyaka wonke. Kodwa-ke, kuvame ukuphola ebusuku nasekuseni kakhulu. Futhi, ngoba Nairobi namadolobha amaningi asezindaweni eziphakeme asendaweni ephakeme kakhulu, kungabanda impela phakathi nosuku phakathi kukaJuni no-Agasti amazinga okushisa kwesinye isikhathi ehla enyuka enamadijithi amancane.
Ukufuduka kwezilwane okwenziwa minyaka yonke - ikakhulukazi ukufuduka kwezinyoni zasolwandle - kwenzeka phakathi kukaJuni noSepthemba ngezigidi zezilwane ezibambe iqhaza futhi kube ngumcimbi othandwayo ngabenzi bamafilimu ukuthi bawuthumbe.
Nairobi - Inhloko-dolobha nesikhungo sezomnotho saseKenya
Garissa - Idolobha elinamaSulumane amaningi empumalanga eseduze neSomalia
Kabarnet - Isango lasedolobheni leLake Baringo neLake Bogoria
Kisumu - Idolobhana elikhulu lasentshonalanga, ogwini lweLake Victoria
Lamu - Idolobha elikhulu le-Lamu Archipelago
I-Lodwar - Enyakatho kwindlela enkulu eya eSouth Sudan nokufinyelela eLake Turkana
Malindi - Indawo okufika kuyo iVasco Da Gama eKenya
Mombasa - Imbobo yomlando oLwandlekazi i-Indian Ocean futhi cishe idolobha lase-Afrika elide kakhulu ngokuqhubekayo
Nakuru - ILake Nakuru National Park nentaba-mlilo esebenzayo
I-Aberdare National Park - Ipaki epholile futhi enamafu Rift Valley enenqwaba yemidlalo enkulu, kanye nezinhlobo zezinyoni ezingaphezu kuka-250
I-Amboseli National Park - isiqiwi saseMasai esixhaphozi esingenye yezindawo ezinhle kakhulu e-Afrika ukubuka izilwane ezinkulu ezincelisayo
IHell's Gate National Park - ipaki lesizwe elincane eliseduzane Nairobi, okuvumela ukuthi uphume emotweni futhi unikeze amanye amathuba amahle wokukhuphuka kwamatshe kanye nomdlalo othile
ILake Nakuru National Park - izinhlobo zezinyoni ezinhle ze-400 zibhalwe lapha kufaka phakathi imihlambi emikhulu yeFlamingos nomaphi emhlabeni
Lake Elementaita - Elinye lamachibi amancane eGreat Rift Valley muva nje limemezele indawo yamagugu omhlaba ye-UNESCO. I-Scenic futhi inothile empilweni yezinyoni.
IMasai Mara National Park - mhlawumbe indawo ethandwa kakhulu eKenya ngenxa yokugcwala kwamakati amakhulu
I-National National Park - cishe ngaphakathi Nairobi nenketho enhle yokubona umdlalo omkhulu walabo abasesikhathini esiqinile
I-Tsavo East National Park - ipaki lomdlalo omkhulu osemgwaqweni omkhulu osuka eNairobi uye eMombasa
IMeru National Park - inqwaba yezilwane zasendle ezinjengendlovu, imvubu, ibhubesi, ingwe, izingulule, obhejane abamnyama nezinye izinyamazane ezingandile.
ISibiloi National Park - ebhalwe njengengosi yamagugu omhlaba ye-UNESCO njengengxenye yeLake Turkana National Parks.
IKenya ineezikhumulo zezindiza ezine zomhlaba jikelele:
Isikhumulo sezindiza iJomo Kenyatta International Airport (NBO) e Nairobi. Cishe imizuzu engamashumi amabili ukusuka esifundeni esikhulu sebhizinisi.
Isikhumulo sezindiza saseMooi eMombasa.
I-Kisumu International Airport Kisumu isikhumulo sezindiza esikhulu esixhumanisa intshonalanga yeKenya nomhlaba.
Isikhumulo sezindiza i-Eldoret International (izindiza zasekhaya nezempahla kuphela).
UJomo Kenyatta uyindawo yokuqala yokufika yezivakashi ezindiza eKenya. Kukhona ukuxhumana okuhle kwendiza okunikezwe yi-KQ ezindaweni ezinkulu zokuvakasha njengeMombasa, Kisumu neMalindi.
Imigwaqo ikakhulukazi isesimweni esihle esifinyeleleka futhi sabhangwa kuzo zonke kodwa izifunda ezikude kakhulu zezwe, ikakhulukazi esifundeni saseNyakatho Kapa. Wonke amazwe angomakhelwane angatholwa kubandakanya i-Ethiopia ngedolobha elisemngceleni laseMoyole, e-Uganda ngeBusia noma iMalaba, kanye Tanzania ngeNamanga.
Ungaqasha i-jeep bese ushayela eKenya, yize kudingeka uqaphele, ngoba kunezimpawu ezimbalwa emigwaqweni futhi ungalahleka kalula. Futhi, izigcwelegcwele zingamisa ukuhamba kwakho futhi zithathe okungokwakho.
Iningi lama-ejensi omhlaba aqasha umhlaba linamahhovisi eNairobi naseMombasa, futhi lawa anikela ngezimoto ezibizayo kodwa ezinokwethenjelwa ezinenethiwekhi ephelele yokuxhasa emuva. Umuntu angaqasha nezimoto ezishibhile kubasabalalisi bendawo abathembeke kakhulu.
Ukuhamba uzungeze iKenya, ikakhulukazi imigwaqo ephuma edolobheni, kunzima. Yize iKenya inendawo yasemakhaya enhle, imigwaqo imvamisa isesimweni sokuncipha ngenxa yokunganakwa. Qasha imoto esindayo / i-jeep ukukusa lapho. Imephu enhle ibalulekile, futhi uma uzishayela kumapaki wegeyimu nokunye okufana ne-GPS kungasiza kakhulu - izaziso zokusayina azivamile futhi awukaqiniseki nakanjani uma usemgwaqweni ofanele, okuholela ekuphendukeni okuningi okungalungile futhi ukubuyela emuva.
IKenya inezinye zezindawo ezihamba phambili emhlabeni zokugcina lapho ungabona ezinye zezimbali nezilwane ezinhle kakhulu zase-Afrika. Lezi ziqiwi zidume ngamabhubesi, izindlulamithi, izindlovu nezinkomo ezinkulu zamadube, izimpisi zasendle kanye nezinyathi. Kuwukuhlakanipha ukuthenga ezitolo zabaqhubi ngaphambi kokukhetha eyodwa, ukubona ukuthi yikuphi okunikezwayo okwamanje, ukuthi ubani ophikisana naye futhi uthole inani lokuncintisana.
Ukufuduka kwasendle okuqalwa minyaka yonke (ukusuka eMaasai Mara kuya ku ISerengeti) ukubuka okumangalisayo futhi okuhlangenwe nakho okuhle ku-balloon safari. Ukubhukha ukubukela ukuthutha kwenziwa kangcono kusasele izinyanga kusenesikhathi ngenxa yesidingo esikhulu kanye nendawo yokulala etholakalayo eMara. Ukufuduka kuphakathi kuka-Agasti noSepthemba.
IKenya futhi iyindawo enhle yamaholide olwandle, enamaningana atholakala ezifundeni ezisogwini kanye nedolobha laseMombasa.
IKenya ibuye ibe yindawo yokuvakasha yamaholide yegalufa, inenqwaba yezifundo ezinhle ezizungeze izindawo ezinkulu zasemadolobheni.
Izindawo ezisenyakatho yeKenya ziyikhaya lezizwe ezithile ezimangazayo eziphila ngendlela engokwesiko - ungaqala ukuhlangana nale miphakathi ephawuleka eduze naseduze komgwaqo omkhulu oya eNyakatho ne-Ethiopia (i-A2 edlula eMarsabit uye eMoyle emngceleni we-Ethopian), kanye neNtshonalanga yalokhu ezindaweni ezinjenge Wamba, Maralal, Baragoi, Korr, Kargi, South Horr, njll.
Bukela ukufuduka kwezilwane zasendle. Iya kumdlalo wokushayela emapaki amaningi nasezigcinweni ezitholakala ezweni. Uma ukuhlelele uhlelo olunzima thatha i-drive drive eNairobi National Park etholwe ngaphansi kwe-20 imizuzu engu-'hamba ukusuka eCentral Business District. Ukuheha okukhulu, amakati amakhulu kufaka phakathi amabhubesi nezingwe, izinyathi, izinhlobo zezinyamazane ezahlukahlukene, imfene, izinkawu phakathi kwezinye.
IsiNgisi nesiSwahili yizilimi ezimbili ezisemthethweni. Ngokuvamile, ungasithola nesiNgisi emadolobheni amakhulu futhi lapho usebenza nalabo abaxhumeke embonini yezokuvakasha kanye naphakathi kwamaKenya asezingeni eliphakeme, kodwa, ngaphandle kwalokho, isiSwahili sicishe sibaluleke kakhulu njengoba iningi lamaKenya linokuqonda okuqondayo kwe ulimi.
Izikhungo eziningi zamukela i-VISA, i-Mastercard ne-Amex. Abathengisi abaningi, abakhulu nabancane, bamukela izinkokhelo zeselula nge-M-Pesa. Eqinisweni akuyona into engjwayelekile ukuthi abantu bakhokhele izimpahla nezinsizakalo kusuka ezingutsheni kuya ezinkambeni ngisho nezikweletu zasesibhedlela besebenzisa izingcingo zabo. Ukuze ubhaliswe, vakashela noma yisiphi isitolo seSafaricom ezweni lonke
IKenya idume ngemisebenzi eminingi yezandla, imvamisa okuyisiginesha sohlanga noma isifunda esithile. Funa imidwebo ye-Kisii (itshe lensipho) eqoshiwe, ubucwebe besiMasai, imidwebo yokhuni yaseMkonde, izihlalo zikaLamu namabiki. Umsebenzi omkhulu wezandla owenziwe ngezandla ungatholwa eMakethe yaseMasai ojikelezayo futhi ongatholakala ezindaweni ezahlukahlukene ngaphakathi kweNairobi, okubandakanya izinto zamaMasai ezinjengobucwebecwebe bokuhloba, amagabha ahlotshisiwe nezingubo zokugqoka ezihlolwe phansi ezigqokwa yiwo wonke amadoda akwaMasai enza kahle izikhumbuzo. Ukwenza isibonelo, ngamaSonto, basesikhungweni saseYaya Centre eduze kwe-hurlingham, kanti, ngoMgqibelo, bangatholakala esifundeni samabhizinisi asenkabeni yezindawo zokupaka izinkantolo.
Ukuthenga izikhumbuzo ngaphandle kokukhokha ngokweqile
Cishe wonke amanani asezitolo eziseceleni komgwaqo ayakhuphuka. Ngenkathi kuxoxiswana kulindeleke, ngisho nentengo okuxoxwe ngayo imvamisa iphakeme kakhulu kunentengo ecashunwe izikhumbuzo ezifanayo esigabeni samahhala seJomo Kenyatta International Airport eNairobi. Njengomthetho wesithupha, qala ukunikezwa kwakho nge-20-25% yenani elicashunwe futhi ungalokothi ukhokhe ngaphezulu kwe-50% yentengo ecashunwe ekuqaleni kunoma yisiphi isitolo sasemgwaqweni.
Izindwangu zeKhanga, kitenge kanye ne-kikoi zilungele ukusetshenziswa njenge-sarongs (zivame e-East Africa kubo bonke abesilisa nabesifazane)
Obhasikidi baseKenya abenziwe nge-sisal nesikhumba nabo bayathandwa.
Izikhungo zamadolobha namadolobhana zivame ukuba nezimakethe ezithengisa izimbali ezifana nezigubhu zase-Afrika, ithusi elidala nelethu, ama-batiks, amasaka okufaka insipho, amatshe aqoshwe e-chess, nemidwebo emikhulu eyenziwe ngokhuni yezilwane noma izitsha zesaladi ezibaziweyo ezingcebeni zodwa teak, mninga noma i-ebony.
NgoLwesihlanu, bakhona eMakethe Yezindlu eGigiri, eduze nekomkhulu le-UN. IGigiri, njengeYaya Center, iyindawo engaphansi kakhulu, ngakho abathengisi bayazithenga izimpahla zabo ngokufanele. Kukhona nokukhethwa okuhle kwezitolo ezithengisa izinto zokwakha eMombasa, lapho umkhathi uthokomala ngandlela thile. Kodwa-ke, izintengo ezinhle kakhulu zingatholakala ngokuthenga okuqondile kusuka kubazingcweti emadolobhaneni abo emaphandleni.
Ngaphandle kwesikhumbuzo esijwayelekile njengokufakelwa kwezinkuni, kungaba ngumqondo omuhle ukuthenga enye yezincwadi ezinkulu enezithombe zezilwane zasendle, imvelo, noma isiko.
Ukuthumela izikhumbuzo ezenziwe ngezikhumba zezilwane zasendle (lokhu kufaka phakathi izirhubuluzi) namagobolondo akuvunyelwe
Ngomqondo wokuthenga okujwayelekile, kunezindawo eziningi zokuthenga ezweni, eziningi zisedolobheni Nairobi. Lokhu kufaka iWestgate Shopping Mall, Galleria Mall, The Junction, The Hub, Imifula emibili, iGarden City Mall, Yaya Center, Village Market, Thika Road Mall, Prestige Plaza, Buffalo mall nokunye.
Kukhona nemikhiqizo yezitolo yasekhaya neyamanye amazwe egcina izimpahla eziningi zaphesheya nezasekhaya; lokhu kufaka phakathi kwaShoprite, amaChoppies, amaTuskys, amaNaivas, ingxenye yomdlalo we-wallmart, Chandarana neCarrefour. Amamakethe amaningi azoba nezinhlanganisela ezicishe zifane nezamazwe aphesheya (iningi laseNingizimu Afrika) kanye nemikhiqizo yasendaweni efana noMnu. Price (umugqa wokugqoka ofaniswa no-H&M), iWoolworths, iNike, iRado, izimonyo zeMAC, i-Converse, iSandepo, iKikoRomeo neSwarovski kanye idlanzana labathengisi abagunyaziwe be-Apple nabakwa-Samsung.
IKenya inezindawo ezinhle kakhulu zokudla e-Afrika. Cuisines eziningi ezahlukene kanye nezinhlobo zokudlela kuyatholakala, kusuka Thai kuya Chinese kuya Traditional Kenyan. Iningi labantu lizothola okuthile ngokuthanda kwabo. Izindawo zokudlela ezinhle kakhulu, kepha emadolobheni amakhulu njengeNairobi neMombasa, iningi lazo liseNairobi. Kunezindawo zokudlela eziningi eziphezulu ezifana neCaramel eNairobi, ezinye zazo zinamathiselwe emahhotela ezinkanyezi ezinhlanu, ezibizayo kodwa kufanelekile ngaphandle kokuthi ubheke ukuzwa ama-cuisine weqiniso waseKenya. Ukudla okusemgwaqweni nakho kufanelekile ukuzama futhi kuvame ukuphepha ukukudla, noma kunjalo, gwema ukudla okuphekwe kakhulu ngaphandle uma uqinisekile ngomthombo wamanzi. AmaMandazi ayizinkomishi zokudla okufana nezinkwa ezivame ukuthengiswa emgaqweni, ummbila ufakwe ohlangothini lukasawoti ukuze unezele ukudla okumnandi futhi kushibhile kakhulu, ama-samosas ayabukeka futhi awanqikazi ukuzama zonke ezinye izinto eziyindidane wona siyathengisa! Futhi, izithelo zezithelo zikuyo yonke indawo-imango nama-avocados okufanele azifele. Izindawo zokudlela eziningi zingatholakala edolobheni nasezindaweni eziseWestlands naseHurlingham kodwa lezi zindawo zigcwele abavakashi. Phakathi kokudla okuningi okutholakalayo yizindawo zokudlela zamaNdiya, amaBrazil, amaChinese, amaThai, amaJaphani, amaJalimane nawaseFrance.
Izindawo zokudlela ezisheshayo zisukela ezitolo zokudlela zasendulo zaseMelika ezifana ne-KFC, iDominos, i-Subway neCold Stone Creamery ezikhungweni zaseNingizimu Afrika ezifana neSteers neDebonairs.Kukhona futhi namaketanga wokudla aseKenya aqukethe njengeBig Square, McFrys neKenchic. Ukudla okusheshayo okuningana nokudla kuletha eNairobi naseMombasa
Isiko lekhofi liyaphila futhi liyaphila; ngezindawo eziningi ezitholakalayo zasendaweni, eyaziwa kakhulu yiJava House, esebenza namagatsha e-29 eNairobi nangaphezulu emadolobheni amakhulu namadolobha ezweni lonke. Ezinye izikhungo zifaka i-Artcaffe, Vida e Caffe ne-Dormans. Lezi zindawo zilungele ikhofi yansuku zonke, noma kunjalo, zivame ukuba ngasohlangothini lwe-pricier, ngakho-ke zilungiselele.
Ubhiya waseKenya uhloniphekile. Kunomkhiqizi omkhulu owodwa ogama lakhe lokugubha linguTusker Lager. Futhi zama iTusker Malt Lager. Enye ubhiya omuhle we-lager yi-White cap Lager. Obhiya abangenisiwe bayatholakala ezitolo ezinkulu kanye namahhotela angcono, kepha amanani entengo avame ukuba phezulu. Kepha kungenisiwe ITanzania ubhiya onjengeKilimanjaro neSafari bavame ukushibhile ukwedlula iTusker.
Amawayini angenisiwe nawasendaweni nemimoya atholakala kabanzi, futhi kungakuhle ukugwema ama-brews endawo anjenge- “njana” kanye ne- “busaa,” okungekho emthethweni, okwenziwe ngokungekho emthethweni nokusetshenziswa kwawo kuholele ekufeni kaningi. Kungakusiza ukukhumbula ukuthi "i-changaa" ngokwezwi nezwi isho ukuthi "ngibulale masinyane" ngaphambi kokuthatha isinqumo sokuphuza noma isiphuzo seglasi esiphuziwe.
Kunokukhethwa okuhle kakhulu kweziphuzo ezingezozo utshwala. Amajusi wezithelo ahlanzekile agcwele kakhulu, futhi ngokuvamile “ijusi” kusho izithelo ezixubene namanzi mhlawumbe noshukela omncane. Iphayinaphu, imango, ikhabe, nezithelo zothando zitholakala kakhulu. Ushukela kanye nejinja le-ginger kuyinto ekhethekile yendawo, njengoba kunjalo netiye lesiSwahili, eliyiti elimnyama elinesipuni. Ujinja uyathandwa kuma-sodas,, nangama-ginger ale brand akwa-Stoney nawaseTangawizi. Ekugcineni, ama-sodas ama-krest abolile we-Krest ayaqabula futhi amnandi.
Wonke amanzi kufanele aphathwe, kungaba ngokubilisa noma ngamacwecwe okuhlanza noma izihlungi. Lokhu kufaka phakathi Nairobi kanye nezindawo zasemakhaya. Zonke izithelo nemifino kufanele zigezwe kahle. Ngenkathi ukudla ukudla okuvela eceleni komgwaqo kuyingxenye yesipiliyoni umuntu okufanele angaphuthelwa ngaso, qaphela ukuthi izindawo ezinjalo azihlali zinezimo zokuhlanzeka eziphakeme kakhulu kanye nokugula kwesisu kungaqubuka.
I-Kenya ingelinye lamazwe ahamba phambili nge-inthanethi enhle e-Sub-Saharan Africa futhi kubhekwe ukuthi inejubane le-inthanethi elishesha kakhulu le-14th emhlabeni.
ISafaricom noma i-Airtel: ngemuva kokuthenga ikhadi le-SIM Starter ungahle ungene kwi-net ngokushesha uma une-handset ekwazi ukusebenzisa i-Intanethi noma imodemu.
ILamu Old Town
AmaHlathi Okungcwatshwa Elingcwele Mijikenda Kaya
Indawo ye-Thimlich Ohinga Archaeological